Iftiinka daadka +DU0129 Jumlo+Huayi Iftiin
Iftiinka gidaarka dhaqda
Qalabka: Jirka aluminium + galaas
Alaabtaan, waxaan u qaadaneynaa naqshad la hagaajin karo oo ah 180 digrii toosan iyo 300 darajo jiif ah, waxaana jira 4 qalab indho-indheyn ah (Shading Annular, Silinda Shading, Koofida Shading iyo Honeycomb) ayaa bedeli kara
1.Ma samayn kartaa laambadda sida shuruudayadayada?
Waxaan u habeynay nalalka qurxinta mashaariicda. Walxaha kale, fadlan kala hadal kooxdayada iibka iyo waxaan ku siin doonaa xal.
2.Waa maxay alaabtaada ugu muhiimsan?
Waxaan nahay alaab-qeybiyaha nalalka mashruuca hal joogsi, waxaan leenahay nalalka qurxinta, nalalka ganacsiga, nalalka dibadda.
3.Ma haysataa shahaado koronto si aad u buuxiso shuruudaha suuqa?
Waxaan haynaa shahaado kala duwan suuqyo kala duwan, fadlan kala hadal kooxdayada iibka.
Ku saabsan Huayi Lighting
Warshada Elektarooniga ah ee Huayi waxa la aasaasay 1986 ka dibna magaceeda waxa loo beddelay ZhongShan Huayi Lighting Company Limited sannadkii 1998. Huayi waxa ay ku taallaa "China Lighting Capital" ---GuZhen, ZhongShan City. 30 sano ka dib horumarinta, ku adkaysiga tayada iyo xirfadda, Huayi wuxuu noqonayaa mid ka mid ah soosaarka iftiinka ee heer sare ah ee warshadaha. Waxaan leenahay agagaarka 150,000 m2 aagga warshadaha, iyo 20,000 m2 showroom weyn, oo ay la socdaan 17 workshops. Waxaan sidoo kale haysanaa shaybaar 3,000 m2 ah kaas oo ah shaybaadhka ugu horreeya ee gaarka loo leeyahay ee warshadaha iftiinka kaas oo hubin kara u hoggaansanaanta badbaadada sawir-bioloji oo awood u leh inuu si toos ah u bixiyo shahaadada cid saddexaad iyo adeegga tijaabinta alaabta iftiinka. Waa shaybaadhka qaranka oo uu aqoonsi ka helay C N A S sidoo kale waa shaybaadhka markhaatiga ee SGS. Sanduuqa maalgashiga ku filan ee R&D waxay u ogolaataa shirkadu inay si joogto ah u bixiso nalalka cusub. Mawqifka hogaamineed ee Huayi ee warshadaha iyo istaraatijiyadeeda suuq-geyneed ee saxda ah waxay xaqiijinaysaa guusha ay ku doonayso inay ku soo bandhigto mashaariic badan oo iftiimin ah oo ah huteelo shan xidigood ah, guryaha ganacsiga dhamaadka ah iyo dhismaha xafiiska dawlada.